खेलकुद – Nepal24News
एक ओभरमा ७ छक्का हान्दै यी खेलाडीले बनाए विश्वरेकर्ड !
एजेन्सी। क्रिकेटमा एक ओभरमा ६ छक्का प्रहार गरेका उदाहरण धेरै छन् । अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा समेत भारतका युवराज सिंहले टी२० अन्तर्राष्ट्रिय र दक्षिण अफ्रिकाका हर्शल गिब्सले एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा एक ओभरमा ६ छक्का प्रहार गरेका छन् । घरेलु क्रिकेटमा त १ ओभरमा ६ छक्का प्रहार गर्ने धेरै खेलाडी छन् । अहिले भने एक खेलाडीले १ ओभरमा ७ छक्का प्रहार गर्दै विश्वरेकर्ड राखेका छन् । श्रीलंकाको घरेलु अण्डर १५ प्रतियोगितामा यी खेलाडीले ओभरका ६ बलमा सबैमा छक्का प्रहार गरे । यो ओभरमा बलरले एक बल नो बल फाले । उनले त्यो बलमा समेत छक्का प्रहार गर्दै एक ओभरमा ७ छक्काको रेकर्ड बनाए । उनले एक ओभरमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै ४२ रन बनाएका छन् । यो ओभरमा कूल ४३ रन बने पछि नोबलको एक्स्ट्रा रन भने ब्याट्सम्यानको खातामा जाँदैन । नवेन्दु पहसारा नामका यी किशोर खेलाडी एक ओभरमा ७ छक्का हान्ने संसारकै एकमात्र खेल
काठमाडौं – भारतीय क्रिकेट टोलीका पूर्वकप्तान महेन्द्रसिंह धोनीले एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाएकोमा नेपाली क्रिकेटलाई बधाई दिएका छन्।भारतीय सञ्चार माध्यमलाई प्रतिक्रिया दिँदै उनले नेपालले पाएको सफलतालाई ठूलो उपलब्धि भएको बताएका छन्। ‘यो नेपालको ठूलो उपलब्धि हो,’ उनले भने ‘एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताले नेपालमा क्रिकेट प्रवर्धन र रूपान्तरणमा थप टेवा पुग्नेछ।’उनले कमजोर टिमहरूले एक दिवसीय मान्यता पाउँदैमा एक दिवसीय क्रिकेटको स्तर नखस्कने दाबी गर्दै क्रिकेटको विश्वव्यापी लोकप्रियता बढाउन र क्रिकेटमा साना टिमको स्तर बढाउन बढी भन्दा बढी टोलीहरुबीच प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने बताए। केहीवर्ष अघि आफू नेपाल गएको र नेपाली खेलाडीहरुले कडा मेहनत गरिरहेको आफ्नै आखाँले देखेको भन्दै उनले नेपालले एक दिवसीय मान्यता पाउनु नेपाली खेलाडीहरुको कडा मेहनत र इमान्दार प्रयासको प्रतिफल भएको बताए।
काठमाडौँ, । अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट इतिहासमा पहिलो पटक एक दिवसीय मान्यता पाएको नेपालले साताँै स्थानका लागि शनिबार नेदरल्यान्ड्सको सामना गर्दैछ । जिम्बाब्वेमा जारी आइसिसी विश्वकप छनोट प्रतियोगिताअन्तर्गत साताँै स्थानको लागि हुने प्लेअफ खेलमा नेपाल र नेदरल्यान्ड्स भिड्दैछन् । बिहीबार भएको प्लेअफ खेलमा नेपालले पपुवान्यूगिनीलाई ६ विकेटले पराजित गर्नुका साथै नेदरल्यान्ड्सले हङकङलाई ४४ रनले पराजित गरेपछि नेपालले एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाउने पक्का भएको हो । एक दिवसीय खेलमा नेपाल र नेदरल्यान्डस् अहिलेसम्म चार पटक आमने सामने भएका छन् । जसमा दुवै टोलीले समान दुई दुई खेल जितेका छन् । शनिबार नै नवौँ स्थानका लागि हङकङ र पपुवान्यूगिनी पनि भिड्दैछन् ।
सन्दिपको ट्वीट भाइरल, आइसीसीदेखि इएसपीएन क्रिकइन्फोसम्मले गरे रिट्वीट
काठमाडौं। नेपालले इतिहासमै पहिलोपटक वन डे क्रिकेटको मान्यता पाएपछि सबैतिर नेपालको चर्चा छ । हिजो अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आइसीसी)को फेसबुक पेज र ट्वीटर पेजमा नेपाल छाएको थियो । यसबाहेक क्रिकेटसम्बनधी ठूला साइटहरुले समेत नेपाललाई निकै प्राथमिकता थिए । यो अभूतपूर्व सफलतासँगै हिजो नेपाली बलर सन्दिप लामिछानेले एउटा ट्वीट गरेका थिए । जुन ट्वीट्लाई अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आइसीसी)देखि क्रिकेटसम्बन्धी संसारकै ठूलो साइट इएसपिएन क्रिकइन्फोलेसमेत रिट्वीट गरेका छन् । उनको यो ट्वीट १ हजार चार सय भन्दा धेरैपटक रिट्वीट गरिएको छ भने ५ हजार ३ सयभन्दा धेरैपटक लाइक गरिएको छ । हिजो नेपालले एकदिवसीय क्रिकेटको मान्यता पाउँदै ठूलो फड्को मारेको खबरसमेत यी साइटहरुले निकै प्राथमिकतासाथ राखे । यसबाहेक क्रिकेट डटकम डट एयु, क्रिकबजसमेतमा यो समाचार निकै प्राथमिकतामा परेको थियो । हेर्नुहोस् सन्दिपको
३० वर्षको प्रयासपछि नेपाल एकदिवसीय राष्ट्र नेपाललाई के भयो उपलब्धि ? काठमाडौं – जिम्बावेमा सञ्चालन भइरहेको एकदिवसीय विश्वकप क्रिकेट छनोटमा पपुवा न्युगिनीसँग विजयी भएपछि नेपालको ३० वर्षे क्रिकेट इतिहासमा नयाँ ढोका खुलेको छ । आजको नयाँ पत्रिकाको पहिलो पृष्ठमा यो समाचार छापिएको छ । अब नेपालले चार वर्षसम्म एकदिवसीय र लिस्ट ए मान्यता पाएका राष्ट्रसँग खेल्न पाउनेछ । चार वर्षमा नेपालले विश्व क्रिकेट लिग, एसिया कप र इन्टरकन्टिनेन्टल कपजस्ता ठूलो प्रतियोगितामा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछ । यसबीच आइसिसी एकदिवसीय वरीयतामा नेपाल सूचीकृत हुनेछ । तर, एकदिवसीय मान्यता पाउँदैमा नेपालले अस्ट्रेलिया, भारत, इंग्ल्यान्ड, दक्षिण अफ्रिका, पाकिस्तान र न्युजिल्यान्डजस्ता राष्ट्रविरुद्ध खेल्न पाउने होइन । किनकि, उनीहरू पूर्ण रूपमा टेस्ट मान्यताप्राप्त टिम हुन् । नेपाल एसोसिएटका तर्पmबाट एकदिवसीयमा मात्र प्रव
काठमाडौं । बिहिबार नेपालले पपुवा न्यूगिनीलाई लज्जास्पद हार चखाएपछि नेपालले क्रिकेट इतिहासमै यो एउटा सुनौलो अक्षरले आफ्नो नाम एक दिवसीय मान्यता प्राप्त राष्ट्रका नाममा लेखाउन सफल भएको छ । नेपालले पपुवा न्यूगिनीलाई हराउनु र नेदरल्याड्सले हङकङलाई हराएपछि नेपालले पहिलो पटक एक दिवसीय मान्यता प्राप्त गरेको हो । विभिन्न आरोह अवरोह खेप्दै नेपाली क्रिकेटले यो यात्रा तय गर्नु आँफैमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हो ।नेपालको यो सफलतालाई आयरल्याण्डका क्रिकेटरदेखि आईसीसीसम्मले बधाई दिइरहेका बेला आईसीसीले नेपालले कसरी एक दिवसीय मान्यता हात पार्न सफल भयो भन्ने कथा लेख्दै नेपालको सफलतामा उसले आफ्नो अफिसियल ट्वीटर र फेसबुक पेजको कभर फोटो नै परिवर्तन गरेको छ । जहाँ यसअघि भारतीय कप्तान विराट कोहलीको तस्बिर राखिएको थियो । उक्त कभरपेजमा आज नेपाली क्रिकेट खेलाडीको फोटो गज्जबसँग सजिाएकोछ आईसीसीले ।
आयरल्यान्डका कीर्तिमानी ब्याट्समेन केभिन ओब्रायनले भने, नेपाली क्रिकेट फ्यानका अगाडि एकदिवसीय खेल खेल्न आउँछौं
काठमाडौं, २ चैत । नेपालले पहिलोपटक एकदिवसीय क्रिकेट राष्ट्रको मान्यता पाएपछि अहिले विश्वभरबाट बधाई दिनेको ओइरो लागेको छ । माइकल क्लार्कदेखि नेपालका पूर्वप्रशिक्षक पुबुदु दासानायकेदेखि क्रिकेट खेल्ने प्रत्येक देशले नेपाललाई बधाई दिएका छन् ।नेदरल्यान्डले बिहीबार हङकङलाई हराएलगत्तै आयरल्यान्डका विश्व कीर्तिमानी ब्याट्समेन केभिन ओब्रायनले ट््िवटमार्फत बधाई दिए । उनले कीर्तिपुरस्थित क्रिकेट स्टेडियममा भरिएका दर्शकको तस्बिर राख्दै लेखेका छन्, ‘बधाई नेपाली क्रिकेटलाई ओडीआई मान्यताका लागि । नेपालको यो दर्शकको भीडमा हाम्रो नेपालमा पहिलो टुरको अनुभव लिन हामी प्रतीक्षारत छौं ।’ केभिन ओब्रायन सिक्स हिटरका नामले प्रख्यात छन् । सबैभन्दा छिटो सय रन बनाउने खेलाडीको कीर्तिमान उनकै नाममा छ । केभिनको ट्विटले चाँडै आयरल्यान्ड नेपालसँग एकदिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता खेल्न इच्छुक रहेको बुझ्न सकिन्छ ।
नेपालीकाे अबकाे सपना, पारस र काेहलीले टस गरेकाे हेर्ने चाहना !
काठमाडौ – नेपाली क्रिकेटले नयाँ खुड्किलाे उक्लिएकाे छ । भाैतिक संरचना र पूवार्धारकाे अभाव तथा घरेलु क्रिकेट अवस्था दयनीय हुँदा हुँदै पनि खेलाडीहरूकाे अथक मेहनतले नेपाललार्इ एकपछि अर्काे गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा सफलता हासिल भइरहेकाे छ । त्यसैकाे मिठाे फल हाे, एक दिवसीय मान्यता । नेपालले याे उपलब्धि हासिल गराेस् भन्ने कामना गर्ने नेपाली लाखाैँ छन् । अझ लाखाैँ नेपालीले नेपाली क्रिकेटर विश्व क्रिकेटमा तहल्का मच्चाइरहेकाहरूसँग एउटै माैदानमा टस गर्दै गरेकाे दृष्य देख्न पाउने कामना गरेकाे पनि धेरै भयाे । अब धेरै हदसम्म त्याे कामना पूरा भएकाे छ । अर्थात्, तस्बिरमा बनाइए जस्ताे नेपाली कप्तान पारस खड्काले एक दिन भारतीय कप्तान सफल ब्याट्सम्या विराट काेहलीसँग टस गर्दै गरेकाे हेर्न पाउने सम्भावनाकाे ढाेका खुलेकाे छ । यस्तै हाम्रा लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेकाे जादूमयी बलले विराट, राेहित
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आईसीसीको ४ बर्षको लागि अस्थायी एकदिवसीय राष्ट्रको मान्यता पाउने निश्चित भएको छ। आईसीसी बिश्व कप छनौटको प्ले-अफमा पपुवा न्यु गिनीलाई पराजित गरेको नेपाललाई मान्यता प्राप्त गर्न आजकै अर्को खेलमा हंगकंगले नेदरल्याण्डसंग हार्नु पर्थ्यो। नेपालले चाहेको जस्तै भयो र नेदरल्याण्डसंग हंगकंग पराजित हुँदा नेपालले पहिलो पटक एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रको मान्यता पाउने निश्चित भयो। नेदरल्याण्डले पहिले ब्याटिंग गर्दै १७४ रन बनाएपछि लक्ष्य पछ्याउने क्रममा हंगकंगले १३० रनमै सम्पूर्ण विकेट गुमाएसंगै नेपाल एकदिवसीय राष्ट्र हुने भएको हो। नेपाली टिमलाई बधाईको ओइरो, कसले के भने पहिलो पटक एकदिवसीय राष्ट्रको मान्यता पाएपछी नेपाली क्रिकेट टिमलाई बिश्वभरबाट बधाईको ओइरो आएको छ भने कप्तान पारस खड्काले सम्पूर्ण नेपाली क्रिकेटका समर्थकहरुलाई धन्यवाद दिएका छन्। एकदिवसीय मान
हङकङको हार र पपुवा न्यूगिनीलाई हराएसँगै नेपाल डिभिजन एकमा
काठमाडौं । जिम्बावेमा जारी आईसीसी विश्वकप छनोट अन्तर्गत एकदिवसीय मान्यताका लागि निर्णायक खेलमा नेपालद्धारा पपुवा न्यूगिनी ६ विकेटले पराजित भएसँगै पपुवा न्यूगिनीले एकदिवसीय मान्यता गुमाएको छ । पपुवा न्यूगिनीले आजको खेलमा लज्जास्पद हार ब्यहोरेसँगै सन २०१४ देखी एकदिवसीय मान्यता पाएको पपुवा न्यूगिनीले एकदिवसिय मान्यता गुमाएको हो । यसैबिच आजको खेलमा निकै नै शानदार खेल खेलेको नेपालको डिभिजन एकमा रहने पक्का भएको छ । तर एकदिवसीय मान्यता पाउनको लागि हङकङ र नेदरल्याण्डको खेल भने नेपालले कुर्नुपर्ने छ ।यद्यपी आजको खेलमा हङकङ नेदरल्याण्डसँ हारेमा नेपालले आजै एकदिवसीय मान्यता पाउने छ । यसअघि नेपालले लगातार ३ वटा म्याच हारेपनि हङकङलाई भने पराजित गर्न सफल भएको थियो ।